စိုးမြတ်နန္ဒာ ၇ဲ့ စက်တင်ဘာ ပုံရိပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » စိုးမြတ်နန္ဒာ ၇ဲ့ စက်တင်ဘာ ပုံရိပ်
စိုးမြတ်နန္ဒာ ၇ဲ့ စက်တင်ဘာ ပုံရိပ်
Posted by blaze on Sep 25, 2011 in Celebrity, Entertainment | 50 comments
ဒီ အကယ်ဒမီ နှစ်ဆု ၇ မင်းသမီးက အခုနောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင် ပြန်ရိုက်ဖို့ လုပ်နေပါပြီ…..
၂၀၀၁ခုနှစ်မှာ (အချစ်ကိုမွေးဖွားခြင်း) ၊ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာ (ချစ်ချင်းငယ်ပြိုင်) ဇာတ်ကားတွေဖြင့် အမျိူးသမီးဇာတ်ပို့ဆု တွေ၇ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဝေဖန်မှုတွေ လုပ်ကြပါအုံး
သားကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဘ၀ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါဗျာ ။ သူ့ကိုတော့ဘာမှမဝေဖန်ချင်ပါဘူး ။
ကောင်းတာတွေလဲ ဝေဖန် ပြောဆိုပေးလို့၇ပါတယ်ဗျ……………
ဝေဖန်တယ်ဆိုမှတော့ .. ကောင်းတာလဲ ရှိသလို ဆိုးတာလည်း ရှိမှာပဲ …
(((ကောင်းတာတွေလဲ ဝေဖန် ပြောဆိုပေးလို့၇ပါတယ်ဗျ……………))) ဆိုတာကြီးတော့ သိပ်မသင်္ကာဘူး … အမျိုးထဲကလား အဆွေထဲကများလားပဲ
ဘာပြသနာတွေ ရှိထားလို့ ဒီလို မေးထားတာလဲ။
ရွာထဲက လွဲရင် ဘယ်နဲ့မှ အဆက်အသွယ်မရှိတော့ လောကကြီး အကြောင်း အကုန်မသိဘူး။
မဝေဖန်ခိုင်းနဲ့ သိတာလေးသာ ပြောပြ။
ရင်ဘတ်မှာ ဘာ tatto ထိုးထားလဲ သိချင်ပါတယ်။ ကို blaze ခင်ဗျား။
ကျွန်ုပ် မစ်စတာပေ ၏
တက်တူး သုတေသန ၊ tattoo research လည်း ပါဝင်သည် ဖြစ်ပေရာ
Dear Wind Talker,
I haveafriend in Myanmar ( Drawing Tattoo )
He said drawing Tattoo on the breast is not easy.
Tattoo drawing pen is vibrating during drawing ( It isamachine ).
In the mean time, the breast ( especially of lady ) is also moving loosely.
( Even, those breasts are firm ( because of, generally teenager )
but those are definitely notahard surface ).
So, he normally need at least one Tattoo assistant
” to hold her breasts tightly & firmly ( not to move ) ” :D
Anybody else want to apply for Tattoo Assistant post ???
ကြောက်ပါတယ် … အဲ့လိုချည်းတော့ မထိုးရဲပါဘူး … အနာလည်း ခံရဦးမယ် … သူ့ assi ကလည်း မရွှေ့အောင် ကိုင်ထားဦးမယ်ဆိုတော့ .. စိတ်ပိန်တယ်
ဖောရိန်းကြီး ပြောတာ ဖတ်ရတော့
နွားမကြီးကို နို့ ညှစ်တာ
By the way, Dear windtalker,
you clearly understand my English in this type of comment.
” ဗမာလို ရေးတင်ပေးပါနော်… ဖောရိန်းရက်စီးဒင့် ရေ… တင့်ခရု ”
Just kidding naw.
Well, she’s married and i know they’ve gotachildren.
I think ,she’s simple.
ကျွန်တော် ဝေဖန်မှုလုပ်ခိုင်းတာက ၊ သူသရုပ်ဆောင်တာ အ၇င်ကလိုပဲ ကြိုက်လား ၊ မကြိုက်ဖူးလား ၊ အ၇င်နဲ့လက်ရှိ ဘာတွေကွာခြားသွားလဲ ၊ စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ………….
ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့ ။အကြည့်ခံတဲ့အလှပိုင်ရှင်လေးပေါ့ ကြည့်လေလှလေပဲ။
ကြုံလို့အန်တီဒေါ်ချိုပြုံးကြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတုန်းက အကြောင်းလေးသူညီမရွှင်ပြုံးသွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းမှာရေးဘူးတာလေး
သူမ(ဒေါ်ချိုပြုံး)တယောက်ထဲစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အမှောင်ချပြီးပြူတင်းပေါက်နားမှာ ထိုင်နေတုန်းအဲဒီပြူတင်းပေါက်ဘောင်အ
စိတ်ဓာတ်ကျရလွန်းတဲ့စိတ်ကဘာကိုမှမမက်မောမတွယ်တာ ၊ပြောချင်ဆိုချင်စိတ်ကုန်နေတာလေ။ (နောက်ပိုင်းတော့ပြန်အိုကေသွားပါတယ်၊ အန်တီချိုလဲ)
ခရီးတပတ်လောက် ရိုက်ကွင်းတစ်ခု ပါသွားခဲ့ဖူးတယ် … နယ်ဖက်ကိုပေါ့ … ငှားထားတဲ့ အဓိက မင်းသမီးကသူပါ … ။ မျက်နှာလေး ချောသလောက် ရိုင်းတာက ပက်ပက်စက်စက်ပါပဲ … ။ ကျွန်မတောင် လက်ဖျားခါတယ် … ပြောတော့ ပရိတ်သတ်က ထမင်းရှင်တဲ့လား … ပရိတ်သတ်က သဘောကျလို့ စကားလာပြော ၊ ရယ်ပြ ၊ ပြုံးပြလျှင်တောင် … မတူသလို မတန်သလို လုပ်လွှတ်တယ် … ။ အဆိုးဆုံးက စကားပြော ဘုကလန့်ကျတာပါပဲ … သူကပဲ အဓိက မင်းသမီးဖြစ်နေလို့လားမသိဘူး … တခြားလူတွေကို ဆက်ဆံတဲ့ အသံက တလောကလုံးကို သူတင်ကြွေးထားသလိုပဲ …။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ စိတ်ထဲ တဖွားဖွားဖြစ်မိတာကတော့ … ဘာတွေများ နင့်မှာ အပိုပါနေလို့ .. မောက်မာနေရတာလဲ မေးချင်မိတယ် ..။
သူနဲ့ပါတဲ့ အိမ်ဖော်ကောင်မလေးတွေကိုလည်း … အရမ်းပြောတယ် … မကြားဝံ့မနာသာ စကားတွေချည်းပဲ … အဲ့ဒါတွေ နားထောင်မိပြီး … မင်းသမီးဆိုတာ ရုပ်သာလှတာ …. ပါးစပ်တွေ အတော်ကြမ်းပါလား လို့ အံ့သြမိတယ် … ။ ကောင်မလေးတွေကလည်း သူက ပြောလေ .. အယောင်ယောင်အလွဲလွဲဖြစ်လေ …. ရူတင်မှာ သူထိုင်ဖို့ခုံမပါလာတော့ … နင်တို့ ထမိန်တွေ ဖြန့်ခင်းပေးမလားတဲ့ လေ… နောက်တစ်ခွန်းထပ်ပြေတာ လက်ဖျားခါပါတယ် … နင်တို့တွေ ခုံတော့ မေ့လာတယ် … နင်တို့ xxxရော ပါလာသေးရဲ့လား အောက်ငုံ့ကြည့်ကြဦးတဲ့ … ။ (လူကြားထဲမှာအော်တာနော် .. အားလုံးက တအံ့တသြဖြစ်မိတယ် .. ကျွန်မကတော့ … အံ့သြရုံတင်မကဘူး .. စက်ဆုပ်မိသလို …. အထင်ကြီးစိတ်လည်း ပျောက်သွားတော့တယ် … ) မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်နေတဲ့ အမေကလည်း တစ်ချက်မှ ၀င်မတားတာ အံ့သြတယ် …။
ဟိုတုံးက ကြားဖူးတာက သူရော၊ သူ့အမကြီးပါ ငွေပေးရင်ရတယ်ဆိုတာပါ။ (ကြေးစား သဘောမျိုး) ။ ဟုတ်မဟုတ် ကိုတော့ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝ သူတွေပဲ ပြောပေးကြပါ။
မိုက်ရိုင်းတယ်၊ အကျင့်မကောင်း ဘူးဆိုတာတော့ လူတော်တော်များများသိပြီးသား ကိတ်စတွေပါ။ ဟိုတုံးက ဟိုလူနဲ့ဧည့်အိပ် ဒီလူနဲ့အိပ် နောက် မင်းသား လူမင်း နဲ့ဇာတ်လမ်း တွေဖြစ်။ ဟိုက သူ့ကိုမယူ ပဲ ခင်စံပယ်ဦး နဲ့ ယူလိုက် တော့ ၊ သူလဲ အားကြမခံ လင်ယူ ပြီး မဂ်လာဆောင် မှာ ”စံပယ်ပန်း” နင်းပြီး လမ်းလျှောက်ခဲ့ဖူးတယ်။
ခုရထားတဲ့ ကလေးကလဲ ဖြိုးကြီးနဲ့ ရတာမဟုတ်ဘူး လို့လဲ (ကောလဟာလ သဘော) ကြားမိတယ်။ ဖြိုးကြီးက ဒီကလေးကို အရေးကောင်းကောင်းမစိုက် တာရော (သူ့ကလေးဆိုရင် တော့ချစ်မှာပေါ့၊ ခုတော့အဲဒီလိုမဟုတ်) ၊ ဒီမင်းသမီး ရဲ့ အကျင့်စရိုက် ကိုရော ကြည့်ပြီး အဲဒါကဖြစ် လောက်တယ် လို့ထင်မိတယ်။
သူ့အမ၊ သူ ပြီးတော့ ခု စန္ဒီမြင့်လွင် ကျတော့ရော၊ မျိုးရိုး လိုက်တယ်ပဲပြော ရမယ်Online မှာ Oral S.xပေးနေတာ ကပေါ်တင် (ရိုင်းသွားရင် သည်းခံကြပါ) ၊ ”နောက်ကနေချစ်ရင် သိပ်ကြိုက်တာပေါ့” ဆိုပြီး ဖင်ကြီး ကိုနောက်မှာရှိတဲ့ J Meဘက်ကိုကုန်းပြီး ပုရိတ်သတ် များစွာရှေ့မှာ ဆိုသွားနိုင်တဲ့ မျိုးရိုးကောင်း သမီး အလိမ်မာ လေးပေါ့။(ရိုင်းသွားရင် သည်းခံကြပါ)
ဖွသူတွေက ဖွပြီဗျို့ အမှားအမှန် ဝေဖန်ဖို့ ကျန်သူများလည်း ရေးပါဗျို့။ မသိချင်လည်း သိနေရ၊ မဖတ်ချင်လည်း မြင်နေရ၊ လိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ မရ။။ ဩော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ…
ငါ့ဟာငါ ခံနိုင်ရည်ရှိလို့ ကမြင်းတာညီးအပူဘာရှိလည်း
ဒို့ကတော့ ခပ်၇ှင်းရှင်းဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲ
ညီးတော့လား တွေ့တဲ့နေရာမှာ နှစ်ခြမ်းဆွဲဖြဲဘလိုက်မယ်
အောင်မလေး စောက်ကျိုးနည်း စိုးမြတ်ဘာဂျာ အောင်လပု ကမြင်းမ … ။
အမြီးနင်းမိတော့ ဆတ်ဆတ်ခါသလား ဟေးဟေး
စကားထဲက ဇာတိပြတယ်ဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ လင်မယူပဲ ကမြင်းကြောထတာ နင်လုပ်နေကြအလုပ် …
ငါတို့က အပျိုစင်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို ထိန်းထားတယ် … အသက်နဲ့ လူမလုပ်ဘူး အရှက်နဲ့ လူလုပ်တာ နားလည်လား နှစ်ဖွန်ချက် ကမြင်းမရဲ့ … ။
ပြောချက်က ၉ လောက်ရှိတယ်ဗျို့။ အကယ်ဒမီ နှစ်ဆု၇ မင်းသမီးလဲ ၊ ကိုဘဘ ပြောမှ ဘာမှသုံးစားလို့ မ၇တော့ဘူး။ အနုပညာပိုင်းကြည့် ပါဗျာ။ သရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းကြည့်ပါဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ အားပေးတယ်ဆိုတာ အနုပညာပါ။ ကျန်တာတော့ လူထဲကလူပဲ ၊ အမှားတော့ရှိမှာပဲ။ နိုင်ငံခြားက မင်းသမီးတွေဆို သည်ထက်ဆိုးနေတာပဲဗျာ…………
Kate Winslet ကိုကြည့်ပါ………………သူ၇တဲ့ Oscar ၇ကားတွေက များသောအားဖြင့်….
blaze ရေ .. ဘာမှ ပတ်သတ်မှူ မရှိဘူး(အမျိုးထဲကမဟုတ်လျှင်) ဆိုလျှင် စလက်ဘရက်တီပုံတွေ တင်ပြီးမဝေဖန်ခိုင်းပါနဲ့ … ဝေဖန်တယ်ဆိုတာမျိုးက ကောင်းတာ .. ဆိုးတာ … ဒွန်တွဲနေတယ် … ။ တစ်သက်မှာ တစ်ခါ ကြုံရတဲ့ အတွေ့ကြုံအရတော့ … အရမ်းရိုင်းတာပဲ ။
””’Kate Winslet ကိုကြည့်ပါ………………သူ၇တဲ့ Oscar ၇ကားတွေက များသောအားဖြင့်….””’
ိုဟုတ်ပါတယ် ကို Blaze၊ သို့သော်ဒါမြန်မာပြည်မှာပါ။ ဝေဖန်ခိုင်းရင် တော့ကောင်းတာပါသလို ဆိုးတာတွေလည်း ပါမှာပါ။ အကောင်းပဲပြောစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းစဉ်မှာ” ဝေဖန်ပေးပါ” မရေးပဲ ”အကောင်းလေးတွေပြောပေးကြပါ”ဆိုပြီးရေးပေးပါ။
”အကယ်ဒမီ နှစ်ဆု၇ မင်းသမီးလဲ ၊ ကိုဘဘ ပြောမှ ဘာမှသုံးစားလို့ မ၇တော့ဘူး။”
အကယ်ဒမီ ဆုရတိုင်း အထင်ကြီးဖို့ မဟုတ်သလို မရတဲ့သူ ကိုလည်း အထင်သေးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ အပြင်မှာသူ့ဟာသူ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဇာတ်ကားထဲတွင်တော့ လူအများအတုယူမမှား ရန် သရုတ်ဆောင် (အထူးသဖြင့် ခါးအောက်ပိုင်းစကားလုံး များ၊ ညစ်ညမ်းဟာသများ) နိုင်ကြပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆုဆိုလို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က လဲ အကယ်ဒမီဆုပေး ပွဲတိုက်ရိုက်ပြကွက်မှာ ” မစိုးကြီးတို့ ကပိုင်တယ်လေ၊ သိတယ်မလား လို့” သူ့ညီမငယ်ဆုရသွားတဲ့ အခါကြားလိုက်ရပါတယ်။ အနုပညာ နယ်ပယ်ထဲက လူတယောက်ပဲဖြစ်မှာပါ။
ရင်ဘတ်မှာ tatoo နဲ့ဣဒြေရှင် အယဉ်အကျေးမင်းသမီး လေးမို့ ……………………
She ( စိုးမြတ်နန္ဒာ ) & her sisters ( စိုးမြတ်သူဇာ )
are worse than ” etone ” & ” ဘဘ ” said.
Kindly go & see at ” Myanmar Celebrity Gossip ( from 1 to 10 ) ” at
စိုးမြတ်နန္ဒာ ဗေဒင်လေးဘာလေးမေးပြီး ယတြာချေသင့်တယ်။
သူတို့ညီအစအမတစ်တွေ(၀မ်းကွဲတွေရော)မှာ စိုးမြတ်သူဇာနဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာကတော့ အလှဆုံးပဲ
ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံးက ကြီးလေ ၀လေဖြစ်နေတယ်
၀ိတ်ချလိုက်ရင် အိုကေပဲ :D
စိုးမြတ်နန္ဒာက အရင်ကထက်စာရင် အခုအရမ်းကို ဝနေတယ်
နောက် သူအခု ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး နေရာက မရိုက်ရတော့သလိုပဲ
မင်းသမီး အစ်မတို့ အပြိုင်တို့နေရာလောက်ကပဲ ပါရတော့တယ်
နောက် နာမည်လည်း နည်းနည်းကျနေပြီ ……….
သူ့ဘာသာနေတဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာလည်း သူ့ဘာသာမနေရပါလားနော်
အရပ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်..အနုပညာလောကကပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးတိုင်းကိုကောင်းကောင်း မွန်မွန်လေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်… အိမ်ထောင်ပျက်တယ်ဆိုတာလည်း ဘယ်သူမှဖြစ်ချင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေ… သူ့ကံကိုကဒီလိုဖြစ် လာဖို့ပါလာလို့နေမှာပေါ့.. လူတွေကတော့ပြောမှာပဲ… ဒီလိုပါပဲ. .ဖြိုးကြီးနဲ့ပြန်အဆင်ပြေစေချင်ပါတယ်.. သူတို့မှာဘယ်လိုအကြောင်းပဲရှိရှိပေါ့.. ဒါမှမြတ်သောမောင်လေးစိတ်မှာအနာတရမဖြစ်မှာလေ….
” သူကတော့ဘာမှပိုမဖြစ်သွားပါဘူး။ ”
I think, ” ဖြစ်သွားပါတယ် ”
It does matter for her.
Because, she earned her money from public.
So, public opinion is very very important for her.
ဘာလို့ ဖြစ်မသွားရမှာလည်း …သူ့အကြောင်း လူသိသွားတာလေ … ။ လူကြားထဲမှာ ယုတ်ရင်း ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားတွေ ပြောထွက်တဲ့ သူ့အဆင့်တန်းကိုလည်း လက်ဖျားခါမိပါရဲ့ … ။
တွေ့ဖူးသမျှ မင်းသမီးတွေထဲမှာ သူ အရိုင်း ဆုံးနဲ့ .. အမောက်မာဆုံးပဲ … အကယ်ဒမီတွေ အများကြီးရထားတဲ့ ရန်အောင်၊ မို့မို့မြင့်အောင် ၊ မေသန်းနု နဲ့ ဦးညိုဝင်းတို့တောင် သူ့လို မမောက်မာဘူး … ။သူကတော့ လက်ဖျားခါအောင် ရိုင်းလွန်းတယ် … အထူးသဖြင့် လက်အောက်ငယ်သားပေါ် ညှာတာမှု မရှိတာပဲ … ။ (ကြုံဖူးတဲ့ လူတွေ သိမှာပဲ) … ။
ကဲကဲ blaze ရေ။ ဒီပို့စ်တင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပဲ သိမှာပါ။
ဒီပုံတွေတင်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေလုပ်ကြပါအုံး ဆိုတော့ သူတို့ မြင်တဲ့ အမြင်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်ကုန်ကြတာပေါ့။
ခင်ဗျားက စိုးမြတ်နန္ဒာနဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်လည်းမသိပါဘူး။
ကောင်းတာပြောလည်း ကျေနပ်ပါ။ မကောင်းတာပြောလည်း ကျေနပ်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဝေဖန်ခိုင်းတာပါ။ ဝေဖန်ပေးကျတဲ့ လူတွေအားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဝေဖန်မှုအပေါ်မကြိုက်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ထပ်ဆင့်နှိုင်းယှဉ် ဝေဖန်လိုက်တာပါ။ အမှားပါ၇င် ခွှင့်လွှတ်ပါ ခင်ဗျာ။…………..
ကိုပေ အဲဒီလို စမ်းသပ်ချင်ရင်တော. ထုံးလမ်းစဉ်လာအရ အဘရဲ.ခွင့်ပြုချက်လိုမယ်နော်
there is no invention to cure the jealously since beginning of mankind.
Comment တွေများလို့ ၀င်ကြည့်ကာမှ ၊ မင်းသမီးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေး ၆ပုံကြည့်ပြီး ဝေဖန်နေကြတာ။ ကောင်းကွာ။ blaze , ခင်ဗျာ အားနေ၇င် မင်းသမီးပုံတွေ ပဲလိုက်တင်နေတာလား?
“blaze , ခင်ဗျာ အားနေ၇င် မင်းသမီးပုံတွေ ပဲလိုက်တင်နေတာလား?”
ကျွန်တော် ဒီ post လေးကိုတင်တာ ကြိုက်သူလဲရှိသလို ၊ မကြိုက်သူလဲ၇ှိမှာပါ။ အားနေလို့ တင်တာတော့ မဟုတ်၇ကြောင်းပါ ခင်ဗျာ။………………………
ဒါမှမဟုတ် ဘာမှမဟုတ်တာကို ငြင်းခုံနေကြတာလား
အင်တာဗူးတွေ ဖတ်ကြည့်ရင် လူ့စိတ်ဆိုတာ အကဲခတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါဒါက အီတုန်းပြောသလောက် ဆိုးမယ်မထင်ပါဘူး။ ဆိုးသည့်တိုင်အောင် မိန်းခလေးချင်း ကိုယ်ချင်းစာပြီးထုတ်ဖော်မပြောသင့်ပါဘူး။
နောက်ပြီး ခလေးက ဖြိုးကြီးခလေးမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတဲ့သူကလည်း ရှိသေးတယ်။ဒီလောက်ရုပ်တူနေတာကို။သူများအကြောင်းကို ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် နဲနဲ သိတာနဲ့များများပြောချင်တဲ့ သူတွေချည်းပဲလား။ အတွေးတွေ အများကြီးရပါတယ်။
မဝေဖန်တတ်သောကြောင့် ဘာမှ မပြောလိုပါခင်ဗျာ…
အသားနာခံပြီး ထိုးထားတဲ့ တက်တူး လေး မဟုတ်ဘဲ
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စတစ်ကာလေးကပ်ပြီး အလှဆင်ထားတဲ့
စတစ်ကာ တက်တူး လေးလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
candle ထင်တာမှားသွားရင်လဲ ဆောရီး ပါ နော်..